Iimeko kunye nokusikelwa umda kwe-Eurborn Co., Ltd
I-Eurborn Co Ltd iqinisekisa iimveliso zayo ngokuchasene nemveliso kunye / okanye iziphene zoyilo kubude bexesha elimiselwe phantsi kwemithetho esebenzayo. Ixesha lewaranti liya kusebenza ukusuka kumhla we-invoyisi. Iwaranti kumacandelo eemveliso ihlala ixesha eliyiminyaka emi-2 kwaye inikwe umda kumngxunya womzimba. Umsebenzisi wokugqibela okanye umthengi angangenisa ibango kumthengisi wakhe ngokubonisa i-invoice yakhe yokuthenga okanye irisithi yokuthengisa kunye namaxwebhu adweliswe kwinqaku 6 kunye nemifanekiso ebonisa isiphene, imifanekiso (i) ebonisa indawo yokusebenza yemveliso, umfanekiso (s) ibonisa uqhagamshelo lombane kwimveliso, imifanekiso (imifanekiso) ebonisa iinkcukacha zomqhubi. I-Eurborn Co., Ltd kufuneka yaziswe ngesiphene ngokubhaliweyo kungadlulanga iinyanga ezimbini ukusukela kumhla ekufumaneke ngawo. Ibango kunye namaxwebhu ahambelana nawo angathunyelwa nge-imeyile kuinfo@eurborn.com okanye ngeposi yesiqhelo e-Eurborn Co., Ltd, edlula ku-Nombolo 6, eHongshi Road, kwiSithili saseLudong, kwidolophu yaseHumen, kwisiXeko saseDongguan, kwiPhondo laseGuangdong, China. Iwaranti inikwa phantsi kwale miqathango ilandelayo:
I-1.Iwaranti isebenza kuphela kwiimveliso, nokuba zithengwe kumthengisi ogunyazisiweyo we-Eurborn Co Ltd okanye kwi-Eurborn Co Ltd, ehlawulwe ngokupheleleyo;
2.Iimveliso kufuneka zisetyenziswe ngaphakathi komda wokusetyenziswa okuvunyelweyo bubuchwephesha bobuchwephesha;
Imveliso kufuneka ifakwe ngoochwephesha abaqeqeshiweyo ngokuhambelana nemiyalelo yofakelo, efumaneka ngesicelo;
Ukufakwa kwemveliso kufuneka kuqinisekiswe ligcisa lofakelo ngokungqinelana nemithetho esebenzayo. Kwimeko yebango esi siqinisekiso kufuneka sinikezelwe kunye ne-invoyisi yokuthengwa kwemveliso kunye nefom ye-RMA (Nceda ufumane ifom ye-RMA kwintengiso ye-Eurborn) igcwaliswe ngokufanelekileyo;
5. Isiqinisekiso asisebenzi ukuba: iimveliso zilungisiwe, zaphazanyiswa okanye zalungiswa ngabantu besithathu abangakhange bafumane mvume kwangaphambili kwi-Eurborn Co. Ltd; ufakelo lombane kunye / okanye loomatshini lweemveliso aluchanekanga; iimveliso zisebenza kwindawo eneempawu ezingangqinelaniyo nezo ziyimfuneko ekusebenzeni ngokuchanekileyo, kubandakanya ukuphazamiseka kwemigca kunye neempazamo ezigqitha kwimida ebekwe ngumgangatho we-IEC 61000-4-5 (2005-11); iimveliso zonakaliswe nangayiphi na indlela emva kokuba zifunyenwe zivela kwi-Eurborn Co. Ltd; Iwaranti nayo ayisebenzi kwiziphene zeemveliso ngenxa yezehlo ezingalindelekanga nezingenakubonwa kwangaphambili, okt iimeko zengozi kunye / okanye ukunyanzelwa kwamandla (kubandakanya ukothuka kombane, umbane) ongenakunikwa inkqubo enesiphene yokuvelisa imveliso;
I-6.I-LEDs Eurborn Co Ltd isebenzisa kwiimveliso zayo zikhethwe ngononophelo ngokwe-ANSI (IZiko leMigangatho yeSizwe laseMelika) C 78.377A. Nangona kunjalo, umahluko kubushushu bombala unokubakho kwibhetshi ukuya kwibhetshi. Ezi nguqu azizukuqwalaselwa njengeziphene ukuba ziwela ngaphakathi kwemida yokunyamezelana ebekwe ngumenzi we-LED;
7.Ukuba i-Eurborn Co Ltd iyasibona isiphene, inokukhetha ukubuyisela okanye ukulungisa iimveliso ezineziphene. I-Eurborn Co. Ltd inokuthi ithathe indawo yeemveliso ezinesiphene kunye nezinye iimveliso (ezinokwahluka ngokobungakanani, ukukhutshwa kokukhanya, ubushushu bombala, isalathiso sombala, ukugqiba kunye noqwalaselo) nangona kunjalo zilingana nezo zinesiphene;
8. Ngaba ukulungiswa okanye ukutshintshwa kungqina ukuba akunakwenzeka okanye kubiza ngaphezulu kwexabiso elithengisiweyo leemveliso ezinesiphene, i-Eurborn Co Ltd inokuphelisa isivumelwano sokuthengisa kwaye ibuyisele ixabiso lokuthenga kulowo uthengayo (iindleko zothutho kunye nofakelo azifakwanga);
9.Ngaba kunyanzelekile ukuba i-Eurborn Co. Ltd ivavanye imveliso enesiphene, ukungafaki kunye neendleko zothutho luxanduva lomthengi;
Iwaranti ayisebenzi kuzo zonke iindleko ezingaphezulu ezibangelwa nguwo nawuphi na umsebenzi ofunekayo ukulungisa okanye ukubuyisela imveliso enesiphene (umzekelo, iindleko ezenziweyo zokudibanisa / ukungadibanisi imveliso okanye ukuhambisa imveliso enesiphene / yokulungiswa / entsha kunye nenkcitho yokulahla , izibonelelo, ukuhamba kunye ne-scaffolding). Iindleko ziya kuthi zihlawuliswe kumthengi. Ngapha koko, onke amalungu aphantsi kokuwohloka, afana neebhetri, iinxalenye zoomatshini ezinokuthotywa, iifeni ezisetyenziselwa ukutshabalalisa ubushushu kwiimveliso ezinemithombo ye-LED; kunye nokusilela kwesoftware, iibugs okanye ii-virus azigutyungelwanga yile waranti;
11. Naziphi na iindleko ezivelayo ngokungafakwa kweemveliso ezineziphene kunye nokufakelwa kwezinye (ezitsha okanye ezilungisiweyo) ziya kuthwalwa ngumthengi;
I-12.I-Eurborn Co., LTD ayinaxanduva lwayo nayiphi na into okanye umonakalo wangaphandle owenzekileyo kumthengi okanye ngabantu besithathu ngenxa yesiphene esiqinisekisiweyo, njengokulahleka kokusetyenziswa, ukulahleka kwenzuzo kunye nelahleko yokonga; Umthengi akazukuphinda afune amalungelo kwi-Eurborn Co., LTD ngokunxulumene nemveliso enesiphene. Ngokukodwa, umthengi akanakho ukufaka ibango kwi-Eurborn Co., LTD naziphi na iindleko ezenziweyo ekugcineni imveliso enesiphene / engalunganga okanye naziphi na iindleko kunye / okanye imbuyekezo. Ngapha koko umthengi akasayi kucela kunye / okanye ukubanga nakuphi na ukwandiswa kwentlawulo, ukuncitshiswa kwamaxabiso okanye ukupheliswa kwesivumelwano sonikezelo.
Emva kokuchongwa, iziphene ezibangelwe ngumthengi okanye umntu wesithathu, i-Eurborn Co Ltd inokunceda ukulungisa ukuba inokulungiswa. Kwaye iya kuhlawuliswa i-50% yexabiso lokuthengisa njengemali yokulungisa. (iindleko zothutho kunye nofakelo azifakwanga); Iimveliso ziguquliwe, zaphazanyiswa okanye zalungiswa ngumthengi okanye umntu wesithathu ongakhange afumane ugunyaziso kwangaphambili kwi-Eurborn Co Ltd, i-Eurborn Co., Ltd inelungelo lokwala ukulungiswa;
14. Ukulungiswa kwesibambiso okwenziwa yi-Eurborn Co. Ltd akubandakanyi ukongezwa kwewaranti kwiimveliso ezilungisiweyo; Nangona kunjalo, ixesha elipheleleyo lewaranti lisebenza kuwo nawaphi na amalungu asetyenzisiweyo kulungiso;
15.I-Eurborn Co., Ltd ayamkeli naluphi na uxanduva olungaphaya kwesi siqinisekiso ngaphandle kwelinye naliphi na ilungelo elinikezwe ngumthetho;